ငါ့ကိုနင်မေ့သွားတဲ့အခါ..သေချာတာတစ်ခုက..ငါနင့်ကိုမမေ့ပါ: အလွမ်းနဲ့မင်း .. မင်းနဲ့ငါ
ကူပါကယ်ပါချစ်သူရယ် . . .
ငါ့အလွမ်းတို့အကြောင်း ရင်ဖွင့်ချင်တယ်ချစ်သူ .... ။
ကြောက်ရွံ့လှပါပြီချစ်သူ .... ။
ငါ့ခများ ... အလွမ်းတွေကို
တိုင်ပတ်နေပြီချစ်သူရေ ..... :)
ဒါကြောင့် . . .
သိက္ခာကျမှာဆိုးလို့ ဖွင့်မဟဖြစ်ခဲ့တာပါ .. ... ။
Posted by mhyaw lint at 6:21 AM
ဆရာလေးရေ... ဒီတခါတော့ သိက္ခာအကျခံပြီး
သာပြောလိုက်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါမှ မရဲရင်တော့ကျနော်ပြောပေးမယ်လေ။ကျနော့်ကို
စတာနော ကိုယ့်ဆရာ ခင်လို့စတာ ပြန်ချော့၇သေးတော်ကြာ ဒါးနဲ့လာခုတ်မှပြေးပေါက်မှားမှာ စိုးရသေးတယ်
ဒီအပိုဒ်လေးကို အရမ်းကြိုက်တယ် ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်ကို သစ္စာရှိတဲ့ ကောင်လေးရေ အမြန်ဆုံးချစ်တဲ့သူနဲ့ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေ
တိုင်တွေ ပတ်ပြီးမူးသွားဦးမယ် သားသားရေ..